အကောင်းဆုံးအခမဲ့သိုလှောင်စနစ်များ။ Gadget သတင်း
နေ့တိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံဖိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌သိုလှောင်မှုပိုယူသည်၊ ၎င်းသည်ပြင်ပသိုလှောင်မှုဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်။ မရသောလူများစွာအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ် အသုံးပြု၍ multimedia ဖိုင်များကိုစုဆောင်းရုံတင်မကဘဲ၊ တူညီသော system နှင့် applications များကကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်ကိုဖြည်းဖြည်းဖြည့်စွက်ပေးသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ဤပြmuchနာသည် ပို၍ စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အရေးကြီးသည်ဟုယူဆသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်လိုသည့်အချက်ကိုရှောင်ရှားရန်၊ ဥပမာအရေးကြီးသောအချိန်များရှိဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများ၊ အွန်လိုင်း cloud။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထားရှိခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိပုံရသော်လည်း၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ Terminal တွင်ရှိခြင်းထက် ပို၍ လုံခြုံသည်၊ ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လျှင်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမရှိဘဲအခမဲ့သိုလှောင်ရန်အကောင်းဆုံးစနစ်များကိုဖော်ပြပါမည်။
ဤသိုလှောင်မှုနည်းလမ်းသည်သင်၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမျှဝေရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ဥပမာ: ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း terminal တွင်ရှိသည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင်သုံးရန်တင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောရှုထောင့်များသည်အကန့်အသတ်မဲ့မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်စွဲမှတ်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
1 အမေဇုံတိမ်တိုက် Drive ကို
2 Google Drive နှင့် Google Photos
2.1 Drive ၏အားသာချက်များ
3 Dropbox ကို
4 တဦးတည်း Drive ကို
အမေဇုံတိမ်တိုက် Drive ကို
Amazon ၌ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုရှိပြီးအခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေရသောမူကွဲရှိသည်။ The ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု အမေဇုံတိမ်တိုက် Drive မှ အခမဲ့, ဖိုင်များကိုသင်သိမ်းထားနိုင်သည်5GB ကို။ အဆိုပါ ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှု သငျသညျဖြစ်နိုင်သောပိုပြီးအာကာသရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် 20GB, 50GB, 100GB, 200GB, 500GB နှင့် 1000GB အထိရှိသည် Cloud သိုလှောင်မှု။ ဒီမှာ သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သင် ... သင့်တယ် Amazon အကောင့်ရှိတယ် သင်ဖောက်သည်များထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းသည်။ သင်၏လည်ပတ်ရေးစနစ်တွင်က Cloud Drive »ဖိုင်တွဲကို။ သင် folder ထဲမှာထည့်ထားသမျှက သိမ်းဆည်းထားသည် မိုဃ်းတိမ်။
သင့်တွင်အခြားကွန်ပျူတာကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများရှိပါက၊ သငျသညျဤဒုတိယကွန်ပျူတာပေါ်တွင် client ကို install လုပ်ပါ အမေဇုံတိမ်တိုက် Drive မှ။ လူတိုင်း သင်၏ဖိုင်များကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်အပြင်က နှစ် ဦး စလုံးနည်းလမ်းများထပ်တူပြုပါလိမ့်မယ်.
ဒီဝန်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ် စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် iOS သို့မဟုတ် Android အတွက်ရနိုင်သည်။ စနစ်နှစ်ခုလုံးအကြားသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်လွယ်ကူသည်။
Google Drive နှင့် Google Photos
ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုဂူဂဲလ်မှကမ်းလှမ်းသည်။ ဂူဂဲလ်ဒရိုက်သည်အမြင့်ဆုံးအထိရှိသည် အခမဲ့ 15 GB, ဘယ်သူကိုသင်ရပါလိမ့်မယ် စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များအတွက်မည်သည့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ် application မှရယူနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင် ပို၍ အခမဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများကိုဘ ၀ အတွက်အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုရှိသည် Excel, Powerpoint နှင့် Word, MS Office အထုပ်၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။
အကောင်အထည်ဖော်ပါ အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းပါဒါကြောင့်၊ သင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဖိုင်တွေဆုံးရှုံးမှုပြproblemနာဟာကွန်ပျူတာပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်တယ်။
မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါ မင်းအတွက် ဂူဂဲလ်သည်စနစ်များကိုအမြဲတမ်းမွမ်းမံရန်တာဝန်ရှိသည်။
Activar la ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများ (သို့) ဗွီဒီယိုများကိုအရံကူးမိသောအခါ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်တိုင်းပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည်ကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ iOS ကို o အန်းဒရွိုက်.
၏အစွမ်းထက်နည်းပညာကိုထည့်သွင်း Google ရှာဖွေမှုများ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးကိုမဆို သုံး၍ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ "ခွေး" ကိုရှာဖွေသောအခါဥပမာ။
၎င်းတွင် function တစ်ခုရှိသည် ဓာတ်ပုံအဟောင်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးအရောင်များနှင့်ပုံပန်းသဏ္presာန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
ကျော်ကြားမှုအများကြီးနှင့်အတူဂန္အကြားတစ် ဦး ကဂန္, ဒါပေမယ့်သင်မြင်သည်အတိုင်း, ကအများဆုံးတတ်နိုင် option ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုကမ်းလှမ်းသည် GB အထိသိုလှောငျ2ခင်ဗျားတို့တိုးချဲ့နိုင်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ Cloud မှာအခမဲ့ပါ ရိုးရှင်းသောအလုပ်များ (သို့) ဒီထက်နည်းသောအလုပ်များဖြင့် ၁၈ ခုအထိ။ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ဟောင်းသောပလက်ဖောင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မျှတသောစွမ်းရည်ပေးထားသောကြောင့်၎င်းသည်လုံးဝခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖိုင်များကိုသင်သိမ်းဆည်းသည်နှင့်ချက်ချင်းအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့တိုင်သင်သည် 18gb သိုလှောင်မှုပမာဏသို့ရောက်ရှိရန်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်၊ 16GB သို့ရောက်ရှိခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးပါ၊ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင်အဆက်အသွယ်များကိုဖိတ်ရန်သာလိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကန ဦး သိုလှောင်ထားသော်လည်း၎င်းသည်နှစ်မျိုးလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအသုံးဝင်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုရရှိလိမ့်မည် iOS ကို y အန်းဒရွိုက်.
၎င်း၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်အထူးအသုံးပြုရန်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ၎င်းသည်ကဏ္theတွင်စျေးအကြီးဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် € 11,99 ၏လစဉ်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်€ 119,99 ၏နှစ်စဉ်ငွေပေးချေမှု။ စီးပွားရေးအသုံးချမှုအတွက်အရာဝတ္ထုများပြောင်းလဲသွားသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတွင်အခြားမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမှမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တဦးတည်း Drive ကို
ကဏ္ the အတွင်းအရှည်ဆုံးလည်ပတ်နေသည့်နောက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ယခင်က SkyDrive ကိုငါသည်အထိအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်သောဝန်ဆောင်မှု သူတို့အခမဲ့အစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Office2Home, Personal နှင့် University package များအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုဖယ်ရှားပြီးထိုသိုလှောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ အခမဲ့ OneDrive ကို 15GB မှ 5GB သို့လျှော့ချလိမ့်မည်။
ဤအချက်သည်သုံးစွဲသူများစွာသည်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုပိုမိုများပြားလာသောအခြားပလက်ဖောင်းများသို့ပြောင်းရွှေ့လာရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင် ၂ ယူရိုသည်သင့်အားသိုလှောင်မှု 2GB ကိုခွင့်ပြုမည်။
အက်ပ်များ၌ OneDrive ဖိုင်များကိုလျင်မြန်စွာဖွင့ ်၍ သိမ်းပါ Word, Excel, PowerPoint နှင့် OneNote ကဲ့သို့သောရုံး။
သင်၏ OneDrive ဖြင့် PDF ဖိုင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » အကောင်းဆုံးအခမဲ့သိုလှောင်မှုစနစ်များ
နှိုင်းယှဉ်ချက်: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro ကထိုက်တန်သလား။
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း eReaders အသုံးပြုမှုသည် ၁၄၀% တိုးတက်လာခဲ့သည်